Bangayithengisa njani iPodcasters ii-Voices zabo zokuYila @IBCShow -NAB Zibonise iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi oMiselweyo weNAB Show-NAB BONISA UVUKA
ikhaya » Okufumaneka » Iipodcasters zinokuzithengisa njani iiVangeli zabo zeNgcono @IBCShow
Iipodcasters zinokuzithengisa njani iiVangeli zabo zeNgcono @IBCShow
Indalo ayisiyomfanelo sonke esinayo ngaphakathi kuthi. Kwiimeko eziphakamileyo kakhulu, sisiseko sokuchonga umntu ukuba ungubani. Zininzi iindlela umntu anokuthi abumbe ngazo ukuba basebenzise ubuchule bakhe. Ngoku siphila kwisigaba sobudala obujolise kumgangatho wobugcisa bokuvelisa izinto, sineendlela ezingakumbi ezaneleyo zokuzibonakalisa kunye nelizwi lokudala esinalo ngaphakathi ngaphakathi elifayo ukuze siviwe kunye nokucela ukuba sibe njengokwenyani njengomnqweno wethu Nxibelelana nayo ngohlobo olunokuba lunokwenzeka. Nokuba sithini na izinto esizithandayo okanye ezinomdla kuyo, nokuba kungoluthando lwethu lokubhala, ukupeyinta, umbongo, okanye umboniso bhanyabhanya, ezona ndlela ziphumelelayo nezingxamisekileyo esinokuthi siphumeze ukufikelela kwinqanaba lomkhangeli zinokufumaneka ekusebenziseni ipodcast.
I-podcast ayisiyo kuphela indlela esebenzayo yokuba umyili avakalise ngokucacileyo izimvo zabo, ikwakhuthaza kakhulu ukubanceda ukuba bathengise ngakumbi kwaye bathengise igama labo eliyilayo. Ngenxa yexesha lethu lobugcisa, ithemba lokuseta i-podcast sele lifikeleleke kumaqonga awahlukeneyo anjenge NAB, Anchor, I-Libsyn, SoundCloud, kwaye ukhetho oluninzi olungathethekiyo phaya luyilelwe ukunceda umzobi ukunxibelelanisa ubuchule abaziyo ukuba bunokubakho uphawu olukhulu. Ngoku, nangona ukuseka i-podcast kunokuba yinkqubo elula, inyani isasele ikukuba ukuze naluphi na uphawu lokufikelela uphawu lwenzeke, ke umxholo womculi kufuneka ube nomgangatho omkhulu emva kwayo ukuze usebenze.
Nokuba ngowuphi umxholo esiziva sithanda kakhulu ngawo, sonke sinqwenela ukuba sabelane ngezona ngcinga zethu zibalulekileyo ngomxholo othethwayo, kwaye ukuze sikufeze oko, kuyanceda ukugcina ucocekile kwaye ucwangciswe kakuhle. Ngoku, oku akuthethi ukuba i-podcaster yoyilo kufuneka ibhale iskripthi kunye nesigubhu somdlalo abaphulaphuli abazama ukuyakhela kwisithukuthezi somphefumlo esiya kuthi ekugqibeleni sibagxothe. Nangona kunjalo, nayiphi na i-podcaster yomgangatho obalulekileyo inokuphumelela ngomgangatho womxholo wabo, kunye nendlela elungileyo yokufunda ngomxholo osemgangathweni owenza ukuba iPodcast enkulu ifumaneke ngokuya kuyo IBC 2019.
I-IBC 2019 ngumdlalo weendaba, wokuzonwabisa kunye nobugcisa. Le nkomfa yetekhnoloji imiselwe ukuba iqhubeke ngoSeptemba 13-19, 2019 eRai Amsterdam, ngababonisi abangaphezulu kwe1,700 kunye nabangaphezulu kwe-55,000 abakho ngabaqulunqi, abenzi bezigqibo eziphambili kunye nomshicileli. Kuyo nayiphi na i-podcaster ekhangela ukufumana ulwazi ngakumbi malunga nendlela abanokuthi bayiphucule ngayo i-podcast yabo yokukhula komkhiqizo, ke i-IBC 2019 ingabanceda ukubanikeza iqonga labo ukubonisa imveliso yabo, ukusungula iimveliso, ukukhulisa inethiwekhi yabo yobudlelwane, njengoko bebandakanyeka. nabathengi abanokubakho kunye neenkokeli zeshishini ezazi onke amanyathelo kunye namatye okomeleza ubuchule obufunekayo bokuzinceda kunye nokukhula kwePodcast yazo. Ukuya kwi-IBC 2019 kuya kuvumela amagcisa ukuba anxibelelane nezimvo ebezithandabuza ngokungathandabuzekiyo ukuba ebejikeleze iintloko zonyaka ophelileyo okanye ezimbini ezichithwe kukuthuthumbisa kuyilo lokuthula zonke zihlala zaziwa ngenxa yokuhlehlisa kwazo.
Ngokuya kwi-IBC 2019, nawuphi na umenzi uya kuba nakho ukufikelela kumboniso omangalisayo ocwangcisiweyo ukubonisa. Iqela le Umboniso we-IBC 2019 ziquka:
IEEE Broadcast Technology Umbutho
IBritani ENkulu kunye neNxweme yeIreland
I-AWEX-I-WALLONIA yokuthengisa ngaphandle kunye ne-AGENCY yokungena
The IEEE Broadcast Technology Umbutho ngumbutho ojolise kubulungu. Ivuleleke kuye wonke umntu kumashishini osasazo kunye namasimi ahambelanayo. Umsebenzi wabo kukusebenzela iimfuno zamalungu njengendlela yokuphucula ulwazi lwabo lobungcali, kwaye bayawufezekisa lo msebenzi ngokubazisa ngeziphumo zophando zamva nje kunye neendlela zeshishini, ezinokunceda ekuboneleleni ngokwazisa amathuba okufundisa kunye nenethiwekhi kubadali kunye Iimpawu abanqwenela ukuzakha. Ngokujonga i-BTS e- Iholo 2 - 2.A60,Iholo 8 - 8.F51, kunye nePailion yamahlakani, abenzi beminqweno banqwenela ukufikelela kwiinkonzo ezimangalisayo ezifana noqeqesho abanikezelayo, iindaba kwishishini kunye netekhnoloji, inkqubo yabo yokusebenza, kunye nendlela abanokubanceda ngayo ukulawula ababhalisele i-podcast yabo.
Xa kuziwa kwintengiso kunye nokwanda okuyimfuneko, abathengi banokusetyenziswa kakhulu ngokujonga I-Great Britain kunye ne-Northern Ireland Pavilion kwaye igxile njani ekuncedeni abantu bakhethe awona maqabane abezona shishini kwezona zinto zibalulekileyo kwezobuchwephesha behlabathi ngokubonisa uluhlu lweemveliso, iinkonzo, kunye netekhnoloji. Esi siza sixhaswe liSebe lezoRhwebo naManye amazwe (i-DIT), elinceda amashishini asekwe e-UK ukuqinisekisa impumelelo yabo kwiimarike zakwamanye amazwe ngokusebenzisa izinto ezithunyelwa ngaphandle. Ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela i-techUK inokuba ngumthombo oluncedo ngayo eyona ndlela kukujonga zombini www.techuk.org kwaye www.great.gov.uk/international/. Bazongena Iholo 5 - 5.B48, Iholo 8 - 8.B38, Iholo 10 - 10.A42.
The I-AWEX-Wallonia Export kunye neArhente yoTyalo-mali Ikhokela uphuhliso nolawulo lobudlelwane boqoqosho e-Wallonia bamanye amazwe. Iingcali kurhwebo lwangaphandle kunye notyalo-mali lwangaphandle, ukuhanjiswa kweArhente yaseWallonia kunye nenkuthazo yolwazi kumashishini wamanye amazwe kunye noluntu lwaseWalloon basebenza ngcono ekuboneleleni ngobungcali bobulunga kwimicimbi yokunyusa, ukukhangela phambili kunye nokwazisa abatyali mali. Oku kunokusebenza kuphela njengenye yeendlela ezininzi zokukhetha abenzi bokuqhubeka nokuphonononga indlela abanokuqhubeka ngayo bekhula kwaye banda kwiimpawu zelizwi labo lokuyila ekugqibeleni banokuba nohlobo oluchanekileyo lwendlela. I-Awex iya kubanjwa Iholo 10 - 10.D31.
Kunye neePlailion ezichaziweyo, abadali baya kukwazi ukutshekisha ii I-Beijing Pavilion iya kubanjwa Iholo 3 - 3.A21, kwaye i I-Korea Pavilion in Iholo 2 - 2.A31. Ngolwazi olungcono malunga nendlela abadali abanokufumana ngayo ukuqonda okungcono malunga nendlela yokuthengisa ngokufanelekileyo ilizwi labo lokudala libe uphawu ngokuvelisa i-podcast, banokutyelela show.ibc.org ukufumana intloko elungileyo.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Digital Nirvana UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli IBC kuhlolwa kweendaba NAB Bonisa Podcasting Umxholo ophantsi i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo	2019-08-02
Previous: I-GatesAir idibanisa iVidiyo ngaphezulu kweNkxaso ye-IP kwiQonga loThutho lwe-Intraplex®